I-Yanni Ironing Laundry - I-Palermo
NgoMgqibelo: 09: 00 - 13: 00
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-25)
Igumbi le-Yanni ironing e Via Cataldo Parisio 56 a Palermo è I-ironing, ukuwasha e Isikhungo Sokuqoqa I-Spatula ngeSonto elibhekene nokuphatha izingubo zakho ngokucophelela futhi nemiphumela eqinisekisiwe.
I-Yanni Ironing Laundry ePalermo - I-Ironing
Igumbi le-Yanni ironing yisixazululo esifanelekile sokuhlanza owomile nokufaka izigqoko zezingubo zakho, ngisho namakhethini nezingubo zokulala. Khetha ubungcweti nobungani bakho I-ironing ngineminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho emkhakheni ukuze ungabi nezinsalo ezimbi. Lokhu Isikhungo Sokuqoqa ngentokozo yemukela izingubo ezintsha okufanele ziphathwe futhi izibuyisele kuwe ngesikhathi sokuqoshwa, esiphelele futhi esilungele ukugqokwa. Lapho I-ironing impela indawo efanelekile yokuletha izinto ezidinga ukunakekelwa okukhethekile, kanye I-ironing uyazi ukuthi angabavimbela kanjani ukuba bangonakaliswa.
I-Yanni Ironing Laundry ePalermo - Laundry
La Igumbi le-Yanni ironing e Via Cataldo Parisi 56 a Palermo inika abathengi bayo inani elingabekezeleleki lemali, ngensizakalo eyomile yokuhlanza neyinsimbi ehlonipha okokugqoka kwakho. Lapho Igumbi le-Yanni ironing yi ukuwasha wazalwa ngokubonga kumnikazi Domenica Spatola, owazi ngokushesha ukuthi anganikeza kanjani insiza enhle ehlanganisa I-ironing e ukuwasha. Jabulela ukwelashwa okugcwele okunikezwa yi I-Yanni Ironing Laundry ePalermo.
Ikheli: Nge-Cataldo Parisio, 58
Umakhala ekhukhwini: 328 5638858
Iwebhusayithi: www. www / .clubazokulu.com
Inombolo ye-VAT: 06604600822